Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. #राशिफल – Page 50 – Janata Live
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । पारीवारिक कलहको सामना गर्नु पर्ला । सबारी साधनको प्रयोमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य कार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) जिबन साथीको अग्रसरतामा कार्य सम्पादन मध्यम रहनेछ । अनावश्यक खर्च तथा लगानिका क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने योग रहेकोछ । नजिकका मित्र तथा दाजु भाई हरु सगँको सम्बन्धमा बैमनश्यता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।स्वास्थमा...
तपाईंको दिन कस्तो रहला ? मनकामना मातालाई एक सेयर गरी राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईंको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।
मेष – प्रयासरत काममा सफलता मिल्नेछ । अन्नधन बढ्नेछ । मान पुरस्कार प्राप्तिको अवसर जुर्ला । खेलकुद र भ्रमणमा रुचि रहला । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । आयवृद्धि हुनेछ । हांसविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । भागदौड भैरहनेछ । जोखिम लिनुबाट बच्नुहोला । बृष – दिन शुभ र भाग्यवर्द्धक रहला । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । आयस्रोत बढ्ला । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । आरोग्यता बढ्ला । साझेदारीसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । सुख सम्पति वृद्धि होला । रसरागमा आकर्षित हुनुहुनेछ । मान पुरस्कारको प्राप्ति हुनेछ । भोजभतेरमा भाग लिनुहुनेछ । मिथुन – यात्रा होला । अन्नधन बढ्नेछ । दूर...
आजको राशिफल : कस्तो रहनेछ तपाईंको भाग्य ? वि.सं.२०७७ साल चैत्र ३० गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल १२ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । वसन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । चैत्र कृष्णपक्ष । तिथि– औशी,०४ घडी २२ पला,बिहान ०७ बजेर ३० मिनेट उप्रान्त प्रतिपदा । नक्षत्र–रेवती,११ घडी ३० पला,बिहान ११ बजेर ०९ मिनेट उप्रान्त अश्विनी । योग– वैधृति,२१ घडी १७ पला,दिउसो ०२ बजेर १६ मिनेट उप्रान्त विष्कुम्भ । करण–नाग,बिहान ०७ बजेर ३० मिनेट उप्रान्त किंस्तुध्न,बेलुकी ०८ बजेर २१ मिनेट उप्रान्त बव । आनन्दादिमा–मातंग योग । चन्द्रराशि–मीन,बिहान ११ बजेर ०९ मिनेट उप्रान्त मेष...
मेष – सुख समृद्धि बढ्ला । मान पुरस्कार प्राप्त होला । आर्थिक कार्यमा अनुकूलता रहला । पारिवारिक सौहाद्र्ध बढ्नेछ । साझेदारीको काम बढ्नेछ । लगानी उठ्ला । कार्यव्यापारमा सफलता मिल्नेछ । बस्तुसित सम्बन्धित काममा सफलता मिल्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । पारिवारिक सुख समृद्धि हासिल हुनेछ । बृष – सुख सम्पति धन मान आनन्द बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्ने छ । शक्ति सामर्थ्य बढ्नेछ । राजकीय कार्य बन्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखेर आशा उत्साह वृद्धि होला । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । ऐश्वर्य बढ्नेछ । मिथुन – सुख...
मेष-धार्मिक काममा खर्च हुनेछ। मित्रको सुख मिल्ने एवम् पारिवारिक भेटघाट रहनेछ। सन्तानको सुख मिल्ने एवम् वैदेशिक सहायता आउनेछ। सरकारी एवम् पदीय जिम्मेवारी बढ्नाले व्यक्तिगत काममा बाधा हुनेछ। सामुहिक काममा व्यस्तता बढ्ने एवम् कार्यभार थपिनेछ। विदेशबाट धन एवम् आफन्तजनको सहयोगमा कामको योजना बन्नेछ। खानपिन एवम् सुखसयलमा खर्च बढ्ने तथा विलासितामा सामान्य खर्च हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा भने प्रगति देखिन्छ। वृष-साताको सुरुमा स्वास्थ्य बाधा हुनेछ। साताको मध्यमा भने पुराना काम पुरा हुने एवम् सामाजिक खर्च हुनेछ। धार्मिक कार्यमा समय एवम् खर्च बढ्नेछ। आफन्त एवम् नाता गोतासँगको भेटघाटले आर्थिक काममा सहयोग मिल्नेछ। काममा प्रगति देखिने तथा राजनीतिक क्षेत्रमा अवसर मिल्न सक्नेछ। पदीय सुख मिल्ने...
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) व्यापार व्यावसायमा प्रसस्त समय दिएपनि आम्दानी थोरै नै हुनेछ । कामगर्दा ख्याल गर्नु जरुरी देखिन्छ,समयमा कामहरु सम्पन्न नहुँदा मान सम्मानमा आघात पर्न सक्छ । पढाइ लेखाइमा तपार्ईँ आफ्नै कारणले बिग्रन सक्छ ध्यान दिनुहोला । यात्राको गतिलो सम्भावना रहेको छ भने विदेशी सामानको व्यापार फस्टाएर जानेछ । मायाप्रेममा अविश्वास बढ्नेछ भने सामान्य स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्या आउने योग रहेकोछ । वृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) व्यावसायमा लगानी गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ भने ईच्छित चाहनाहरु पूरा हुने हुनाले मन चङगा हुनेछ । भूमि, वाहन तथा पैत्रिक सम्पतीको उपयोग गरी थप फाइदा लिन सकिनेछ । दाजु तथा अग्रजको सहयोगले उपलव्धीमुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । अध्ययनमा अध्यापनमा...
मेष- धार्मिक काममा खर्च हुनेछ। मित्रको सुख मिल्ने एवम् पारिवारिक भेटघाट रहनेछ। सन्तानको सुख मिल्ने एवम् वैदेशिक सहायता आउनेछ । सरकारी एवम् पदीय जिम्मेवारी बढ्नाले व्यक्तिगत काममा बाधा हुनेछ। सामुहिक काममा व्यस्तता बढ्ने एवं कार्यभार थपिनेछ। विदेशबाट धन एवम आफन्तजनको सहयोगमा कामको योजना बन्नेछ । खानपिन एवम सुखसयलमा खर्च बढ्ने तथा विलासितामा सामान्य खर्च हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा भने प्रगति देखिन्छ। वृष- साताको सुरुमा स्वास्थ्य बाधा हुनेछ। साताको मध्यमा भने पुराना काम पुरा हुने एवम् सामाजिक खर्च हुनेछ। धार्मिक कार्यमा समय एवम् खर्च बढ्नेछ। आफन्त एवम् नाता गोतासँगको भेटघाटले आर्थिक काममा सहयोग मिल्नेछ। काममा प्रगति देखिने तथा राजनीतिक क्षेत्रमा अवसर मिल्न...
२०७७ चैत २८ गते शनिबारको तपाईको राशिफल मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च होला । यात्रामा मालसामान हराउन सक्छ । कार्य सम्पादनमा समस्या आउला । साँझमा पैसा खर्च हुने योग पनि छ । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) आज मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ । सांस्कृतिक क्षेत्रमा रुची बढ्ने छ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्ने छ । वैदेशिक कार्य पनि अघि बढ्ने छ । सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) आज महत्वपूर्ण कार्यमा व्यवधान आइपर्ला । नजिकैको व्यक्तिले मन दुखाउन सक्नेछ, सचेत रहनुहोला,...
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) नयाँ कार्यको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । साजेदारी कार्यमा बिशेष सजग रहनु होला । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । बोलिको प्रभाव बढ्नाले ईष्ट मित्रको साथ मिल्नेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ । कलाकौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने छ । आम्दानि उत्तम रहला । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) सम्पादित कार्यहरुका क्षेत्रमा सामान्य झन्झट आई पर्नेछ । मान्यजन तथा पारिवारीक साथसहयोगमा केहि दुरताको सामना गर्नु पर्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु राम्रो रहनेछ । बिद्या तथा...